Fursadaha Shaqada iyo Faa'iidooyinka Koorsada Shahaadada Oracle - ITS
OCP ama barnaamijyada shahaadooyinka ee Oracle ayaa caan ku ah sababtoo ah guud ahaan isticmaalka guddida barnaamijyada Oracle, alaabta, iyo maamulka. Barnaamijyada shahaadada waxaa lagu sameeyaa Oracle lafteeda, waxaanay rajo ka qabtaa barashada iyo awoodaha lagu aqoonsaday bixinta bixinta Oracle. Dadka haysta shahaadada Oracle waxaa isticmaala MNCs, ururada Fortune 500 iyo ururrada kale ee gaarka loo leeyahay iyo kuwa furan, waxayna qabtaan xirfad aad u faa'iido badan oo magdhow ah oo ku yaal mawduucooda ama Macluumaadka Teknolojiyada, maamulka xogta, xogta weyn, daruuriga iyo qaybaha la xidhiidha.
Shahaadooyinka Oracle waxaa maanta lagu bixiyaa 9 qaybo kala duwan oo farsamo ah oo ay ku jiraan Database, Application, Java iyo Qalabka Nidaamka, Nidaamka, Oracle Cloud, Nidaamyada Nidaamyada, Maareynta Ganacsiga iyo Dhaqangelinta. Shahaadooyinka xogta ee Oracle waa kuwo si muuqata u caan ah sababtoo ah ramigalintoodii runta ah iyo isticmaalkooda. Shahaadooyinkan waxaa lagu bixiyaa heerar ballaadhan oo aad ku dhigtaan habka faa'iidada leh ee horumarinta xirfadda. Qaar ka mid ah shuruudaha Oracle-ka ee macluumaadka Oracle waxaa bixiya Oracle waxaa ka mid ah:
Shahaadada Sharciga ee Oracle Certified Associate: Koorsada heerka aasaasiga ahi waxay wax ka bareysaa kartida ugu horreysa tartanka ee maamulka xogta iyo ururka.
Shahaadada Aqoonsiga Meelmarinta ee Oracle: Khabiiradaasi waxay la tacaali karaan macluumaadka waaweyn ee waaweyn, waxaana sidoo kale abuuri kara codsiyo aad u qiimo badan oo ku saabsan hawlaha ganacsiga.
Shahaadada Master's Certified Master shahaadadani waxay awood u siinaysaa inay suurtogal u noqoto in ay eegto oo ay la socoto qaabdhismeedka xogta iyo macluumaadka la xidhiidha iyaga.
Shahaadada Aqoonsiga ee Oracle Certified: Shahaadadani waxay muujineysaa in aad leedahay aqoon iyo waayo aragnimo khibrad leh iyo barashada meelaha kala duwan, horumarinta iyo naqshadeynta xogta.
Faa'iidooyinka Shahaadada Oracle ee Musharrixiinta
Faa'iidooyinka Shahaadada Oracle ee Ururka Shaqaalaha
Barnaamijka Oracle Codsadaha
Noqo Oracle Certified
Shahaadada Oracle ee goobaha sida Oracle DBA iyo kuwa kale waxay siiyaan faa'iidooyin badan kuwa haysta. Qaar ka mid ah kuwaan waxaa ka mid ah:
Kordhinta magdhowga ama helitaanka
Saadaasha horumarinta sare
Tilmaamo shaqo oo fiican
Isbeddel ku dheelitirnaan iyo khibrad
A faham sare oo qoto dheer oo ah qalabka teknoolajiyada
Shahaadada caadiga ah ee la rabo in la dhammeeyo iyadoo la dhammeynayo imtixaan dawladeed oo xadidan. Shahaadooyinka Oracle waxay leeyihiin aaminaad sarreeya iyo tayada aan laheyn waxayna calaamad u tahay sax.
Ganacsiyada sidoo kale waxay helayaan tiro fara badan oo faa'iido leh iyagoo soo iibsanaya tartame oo leh Oracle DBA ama shahaado kale oo kale oo Oracle ah. Qaar ka mid ah kuwaan waxaa ka mid ah:
Heerka wanaagsan ee ku tiirsanaanta
Hagaajin ka fiican hawsha
Hawlaha ugu muhiimsan ee shaqeynaya
Dakhliga sare iyo munaasibnimada leh ee waxtarka leh
Xaqiijin wanaagsan oo leh macaamiisha ururada iyo kor u qaadista qiimeeynta suuqa
Furitaanka shaqada ee Oracle waa mid aan looga bixi karin sida qaababka oracle ee Oracle ay yihiin noocyada kumanaan urur oo ku yaalla meeraha.
Maamuleyaasha xog ururinta ee Oracle waxay ka helayaan shaqooyin xarumo caafimaad, ururada farsamada, ururada lacagta, shirkadaha talasiinta maamulka, ururada farsamada iyo dawladda gobolka iyo PSUs, jaamacadaha, dugsiyada iyo xarumaha kale ee waxbarasho, shirkadaha ku jira qaybta tignoolajiyada macluumaadka iyo qaybaha kale ee casriga ah. Khabiiradaasi waxay u xilsaaran yihiin arrimaha kala duwan ee amaanka ee lagu aqoonsado kaydka Oracle waxaana sidoo kale mas'uul ka ah ilaalinta, socodka iyo kontaroolida degaanka maalin kasta.
Khabiiradan IT-da waxay u shaqeeyaan sida baaritaanada xogta, injineerada software ee kombuyuutarrada, iyo agaasimeyaasha qaab-dhismeedka Oracle iyo nidaamyada, iyo sidoo kale in ay helaan shaqo PC ah, iyo naqshadeeyayaasha shabakadaha iyo maamulayaasha. Waxay soo bandhigi karaan codsiyada cusub waxayna sidoo kale hubin karaan amniga qaababka, qaababka, iyo codsiyada. Waxay sidoo kale laga yaabaa inay mas'uul ka noqdaan abuurista iyo hannaanka qaab-dhismeedka database-ga waxaana laga yaabaa inay leeyihiin hawlo lagu aqoonsaday karti-xirfadeedka sidoo kale.
Marka laga reebo xogta macluumaadka iyo codsiyada, waxaa jira tiro badan oo farsamo oo farsamo oo dheeraad ah oo laga heli karo shahaadooyinka Oracle. Keenista wadashaqeynta takhasuska internetka waxay awood kuu siineysaa inaad ku buuxiso shahaadada Oracle ee ka soo baxda gurigaaga laftiisa. Halkaan waxaad ka heli kartaa adigoon wax fara badan samaynin oo aad ku guuleysatid Oracle DBA diyaarinta hawlaha runta ah, waxay diyaariyaan macalimiin khibrad leh iyo waliba maalin kasta, maalin kasta, marin u hesho dhammaan qalabka waxbarashada iyo hantida kaasoo kuu sameyn kara khabiir Oracle.